स्वर्मिफाई: यूट्यूब भिडियो प्रयोग नगर्नुका चार कारणहरू तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटमा | Martech Zone
यदि तपाईंको कम्पनीसँग पेशेवर भिडियोहरू छन् जुन तपाईंले हजारौं डलर खर्च गर्नुभयो, तपाईंले यूट्यूबमा खोज परिणामहरूको फाइदा लिन YouTube मा बिल्कुल प्रकाशित गर्नुपर्दछ…। केवल यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको YouTube लाई अनुकूलन गर्नुहोस् भिडियोहरू जब तपाईं गर्नुहुन्छ। त्योले भन्यो, तपाईको कर्पोरेट साइटमा तपाईले यूट्यूब भिडियो इम्बेड गर्नु हुँदैन… धेरै कारणका लागि:
YouTube ले ती भिडियोहरूको उपयोग ट्र्याक गर्दैछ लक्षित विज्ञापन। किन तपाईं आफ्नो आगन्तुकको आशय गुगलसँग साझा गर्न चाहानुहुन्छ ताकि उनीहरूले तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको लागि विज्ञापनलाई धक्का दिन सक्छन्?
जब सम्म तपाईं बिर्सनुभयो, तपाईं सायद जानुहुन्छ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको सान्दर्भिक भिडियोहरू तपाइँको यूट्यूब प्लेयर मा! तपाईंको साइट भ्रमण गर्ने, तपाईंको भिडियो हेरिरहेको कल्पना गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको प्रतिस्पर्धीको भिडियो सान्दर्भिक विकल्पको रूपमा प्रदर्शन हुनेछ। आउच!
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, YouTube वास्तवमै हो एकदम ढिलो र भिडियो प्राय: कहिलेकाँही सुरू हुँदैन जब भिडियो बफरि। गर्दैछ। हे ... यो नि: शुल्क छ, हैन? ठिक छ ... एक व्यवसायको लागि जुन ग्राहकलाई बन्द गर्न कोशिस गर्दैछ यो त्यस्तो छैन। इन्टरनेटमा गति लिनको लागि बिल्कुल लागत छ।
YouTube को भिडियो प्लेयर धेरै छैन अनुकूलन… तल यो भिडियो नोटिस गर्नुहोस् जहाँ मँबाट केहि विकल्पहरू छन् मैले रोज्न ... यूट्यूबमा हेर्नुहोस्, लिंक खोल्न युट्यूबमा खोल्नुहोस्, पछि युट्यूबमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, वा प्ले प्रेस गर्नुहोस्। यो सबै तपाइँको ब्रान्डको सट्टा YouTube को लागि ब्रान्ड गरिएको छ। किन एक प्लेयर मात्र विचलन रहित र काम गर्दछ?
मैले सायद तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै साइटमा भिडियोहरू होस्टिंग बेवास्ता गर्न सल्लाह दिनुपर्दछ। तपाईंको विशिष्ट वेब होस्टसँग हजारौं आगन्तुकहरूलाई स्ट्रिम गर्नको लागि पूर्वाधार छैन। वास्तवमा, त्यहाँ राम्रो मौका छ कि तपाईं केही डाउनलोड थ्रेशोल्डहरू तोड्नुहुनेछ र अधिक चार्ज हुनुहुनेछ। तपाइँ निश्चित रूपमा एउटा भिडियो होस्ट चाहानुहुन्छ ... YouTube मात्र होइन।
एक सेकेन्ड पर्खनुहोस्, तपाईं भन्नुहोस् ... डग ... तपाईं सधैं तपाईंको साइटमा यूट्यूब भिडियो इम्बेड गर्नुहोस्। ठीक छ, मान्छेहरू, यो एक प्रकाशन हो ... व्यापार साइट होईन। म वास्तवमा YouTube बाट भिडियो सम्मिलित गर्न मनपराउँदछु ताकि सिर्जनाकर्ताहरूलाई भेटिन्छ र उनीहरूको सदस्यता लिन थप दृश्यहरू र अवसरहरू प्राप्त गर्न। जब मसँग मेरो व्यवसायको लागि केहि पेशेवर भिडियोहरू हुन्छन्, म तिनीहरूलाई निश्चित रूपमा होस्ट गर्दैछु Swarmify.
त्यहाँ अवश्य छ, अर्को अपवाद ... तपाईं एक YouTuber हुनुहुन्छ!
Swarmify स्मार्टविडियो: द्रुत भिडियो होस्टिंग
Swarmify तपाइँको कर्पोरेट वेबसाइट को लागी एक मजबूत र छिटो भिडियो होस्टिंग समाधान प्रदान गर्दछ। यहाँ एक सिंहावलोकन भिडियो छ:
Swarmify केहि अविश्वसनीय सुविधाहरु प्रदान गर्दछ:
CDN - तिनीहरूसँग ग्लोबल छ सामग्री वितरण नेटवर्क (CDN), यसको मतलब यो हो कि व्यक्तिलाई अनुरोध गर्दै भिडियो र यो वितरणको स्थान बीच एकदम थोरै ढिलाइ छ।
बफर फ्री प्लेब्याक - स्मार्टवीडियोले स्वार्मीफाइको पेटेन्ट-पेन्डि delivery वितरण समाधानको उपयोग गर्दछ, स्ट्याल आउटलाई 8 गुणाले घटाएर।
लगातार अप्टिमाइजेसन भिडियो स्ट्रिमि। - प्लेब्याक भरमा, स्मार्टभीडियोले निरन्तर प्रत्येक व्यक्ति प्रयोगकर्ताको भिडियो अनुभव अनुगमन गर्दछ र विफलताहरू देखा पर्नु अघि उनीहरूलाई रोक्दछ।
उपकरण एन्कोडिंग - आगन्तुकहरु उत्तम उपकरण प्रदान गर्न आफ्नो उपकरणको लागि भिडियो अनुकूलित हुन्छन्। चिन्तामुक्त र स्वचालित रूपमा नयाँ उपकरणहरूको लागि अपडेट गरियो।
स्वच्छ, व्याकुल-मुक्त प्लेयर - अधिक बिक्री गर्नुहोस्, र बाउन्स दरहरू कम गर्नुहोस् तपाईंको आगन्तुकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डमा केन्द्रित गरेर। विशाल ग्राहकहरू र सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईंको ग्राहकहरूलाई टाढाका लागि डिजाइन गरिएको छ।
वर्डप्रेस प्लगइन - स्क्रिप्ट र इम्बेडको साथ वरिपरि गडबड गर्न आवश्यक पर्दैन, स्मार्टभिडिओमा तपाइँलाई उठाउन र सजिलैसँग चालू गर्न प्लगइन छ।
मूल्य निर्धारण - तपाइँ तपाइँको साइट मा उच्च गुणवत्ता सामग्री सेवा को लागी दंडित गर्नु हुँदैन। त्यसकारण स्मार्टवीडियो बिलि band ब्यान्डविथमा आधारित छैन, केवल भिडियो दृश्यहरूमा।
यहाँ गति को एक साइड-साइड-तुलना तुलना छ:
YouTube भिडियो इम्बेड
यदि यो पर्याप्त छैन भने स्मार्टवीडियोले स्वचालित रूपमा युट्यूबबाट तपाइँका भिडियोहरू फेच पार्दछ, तिनीहरूलाई एन्कोड गर्दछ, र तिनीहरूलाई भण्डार गर्दछ। त्यस पछि, YouTube प्लेयर पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरिएको छ र तपाईंको भिडियोहरू हाम्रो ग्लोबल डेलिभरी नेटवर्कमा होस्ट गरिएको छ र हाम्रो त्वरित प्लेब्याक टेक्नोलोजी मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।
Swarmify को साथ सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु Swarmify स्मार्टवीडियो.
टैग: बफरिव्यवसाय भिडियो होस्टिंगकर्पोरेट भिडियो होस्टिंगछिटो भिडियो होस्टिंगस्मार्टवीडियोझुण्ड्याउनुभिडियो सीडीएनभिडियो एन्कोडिङभिडियो होस्टभिडियो होस्टिंगWordPress प्लगइनयूट्यूब वैकल्पिक